Kulan u socday ururada siyaasada Puntland & Gudiga Dorashoyinka oo lagu kala kacay – SBC
Kulan u socday ururada siyaasada Puntland & Gudiga Dorashoyinka oo lagu kala kacay
Shirkii uga socaday 6 da Urur siyasadeed ee ka jira Puntland xarunta PDRC ee Magalada Garowe oo ay soo agasintay Gudduiga Doorashooyinka ee kumeel gaarka ah ayaa shalay lagu kala kacay kadib markii lagu kala qaybsamay sida uu SBC u sheegay Gudoomiyaha Ururka UDAD Sicid Farax Maxamed oo laysku mari wayey qodobo laysku dhaafi waayey ay ka mid ahayeen diwaan galin la’aan in lagu galo doorashooyinka Dowlahada hoose taas oo ay ku tilmameen mid aan hada samaxayn in ay doorashadu u dhacdo aqoonsi la’aan dadka ah.
Sicid Sanwayne Gudoomiyaha Urur Siyasadedka UDAD waxaa uu sheegay in ay dood dheer ay Ururadda qaarkood ku raceen in doorashada lagu galo Aqoonsi la’aan taas oo ay Ururka UDAD iyo kuwa kale ay ka soo horjeesteen halka kuwa kalena ay ku racaane taas oo sabab ay uga dhigeen ururadda la fikirka ah Xukumada in ay doorashada wakhtigeeda la dhaafin oo Dhaqalaha dalku uu aad u hooseeyo iyo wakhtiga oo gabaabsi xiligii loogu tala galayna aysan waxba ka harsanayn.
Waxaana uu intaasi ku daray in ay ku shaqaynayaan rabitaanka dadka oo ay doonayaan in la diwaan galiyo aqoonsiyana loo sameeyo si doorashadu u noqoto mid xalaala cadalanda ku dhaxo si meesha looga saaro ku shubasho.
Mar wax laga waydiiyey waxaa ka soocay Ururadda kale ayuu sheegay in Guddigu doonayo in wakhtiga loo qabtay doorashooyinka ay doonayaan in ay dhacdo diwaan galin la’aan ay tahay wax aan macquul ahayn oo loo bahan yahay in wakhtiga dib loo sii dhigo.
Bisha may kama duwana bilaha kale mana ninhin kuwa ka soo horjeeda nidaamka dimuqradiyanta oo Puntland doonaysoo,
Dhanka xukumada ayuu sheegay in ay dhagaha ka furaysanayso qodobada laysku mari la’ yahay oo la doonayo in la marsiiyo Shacabka ka soo horjeeda nidaamka Aqoonsiga oo doorashadu ku dhacayso sidaasi waxa yiri Gudoomiyaha UDAD Siciid Sanwayne.
Gudiga Doorashooyinka ayuu ku tilmamay Sicid mid aan dhex dhexaad ahayn ayna horay u muujiyeen waxaana u sheegay in ay isu badiyaan dhanka xukumada oo hada Ururkoodu hayo Talada, shirkuna maanta sidaas ku burburay laguna kala kacay laakin waxaa uu rajo wanagsan ka muujiyey in hanaanka dimuqradiyantu uu sii soconaya.
Kulanka waxaa shalay ka qayb galay oo warbaahintu ay banaanka ka joogtay lixda urur siyasadeed oo uu ka mid ahaa Madaxwayna ku xigeenka Puntland C/samad Cali shire iyo Guddiga doorashooyinka Puntland ee Kumeel gaarka ah.